The hedges - Stylish retreat enhliziyweni yedolobha - I-Airbnb
The hedges - Stylish retreat enhliziyweni yedolobha
Beeston, England, i-United Kingdom
Ibekwe endaweni ethule yokuhlala, leli fulethi elinamagumbi okulala amabili, elizimele lihlala engadini evuthiwe, egcwele izimbali. Iyisijobelelo sendlu enkulu yama-Victorian kodwa inendlu yangaphakathi yesimanje esanda kulungiswa futhi ikhipha kokubili ubuhle nokunethezeka. Kuyindawo yeqiniso edolobheni elimatasatasa kodwa imizuzu nje ukusuka kukho konke uBeeston noNottingham okufanele bakunikeze. Inokupaka mahhala ngaphandle komgwaqo kanye ne-wifi.
Inegumbi lokulala eliphindwe kabili, indawo yokuphumula yohlelo oluvulekile / indawo yasekhishini kanye nendawo yayo yokugezela, le ndawo ethokomele ineminyango yaseFrance engadini ebiyelwe yangasese. Isikhala silungele izithandani noma isivakashi esisodwa futhi singaguquleka kalula sibe indawo yokusebenza.
Ikhishi lesimanje lincane kodwa lihlome kahle nge-halogen hob, ihhavini eliwusayizi ogcwele, i-microwave, ifriji, i-toaster. Ifulethi linefiber wifi, i-tv ene-roku ne-freeview kanye nesistimu yayo yokushisisa.
Ngoba isendaweni yokuhlala ethule futhi efiselekayo, iHedges ihlinzeka ngendawo ekahle 'yokubaleka' kodwa iseduze nemizila yamabhasi neyethilamu eya eNottingham ngakho ilungele ibhizinisi noma ukuhlala emsebenzini.
Ingadi okwabelwana ngayo inezindawo zokuhlala kanye nezinsiza ze-BBQ futhi iyindawo enokuthula kusihlwa sasehlobo
IBeeston inesikhungo sedolobha esihle esinezindawo zokudlela eziningi, izitolo zekhofi, imigoqo kanye nezindawo zokucima ukoma kanye nezindawo zokuthenga nezitolo ezinkulu (Sainbury's, Tesco, Lidl, Co-op), izitolo eziphakeme zasemgwaqweni namabhange kanye nesinema esanda kuvulwa. Ngakho-ke, ikunikeza konke okudingayo ngokuhlala kwakho.
Ifulethi lihamba ibanga ukusuka eNyuvesi yaseNottingham West Entrance, eWollaton Park kanye nepaki yezinyamazane kanye nesiqiwi semvelo sase-Attenborough esinamakhefi asemfuleni ngaseTrent ngakho isikhala esingaphandle esiluhlaza sikhulu impela.
UJo uhlala endlini exhunywe kule ndawo (futhi uzokwazi ukusiza uma kudingeka, ngocingo noma mathupha.
Hlola ezinye izinketho ezise- Beeston namaphethelo